Haye Mike! Suuqgeyntu Sidoo Kale Waxay Ku Saabsan Tahay Sameynta | Martech Zone
Axad, Sebtembar 23, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Shalay, waxaan ka helay iimayl akhristaha, Mike, oo i weydiiyay sababta aan ugu dhejin doono balooggeyga oo i tusay inaan yahay timo madow, ku habboon oo aan gooyn karo marka-dhab ahaantii-aan cawl iyo cayil badan ahay. Waxaa la yaab leh, sawirka aad ku aragtay balooggeyga waa aniga ilaa 5 sano ka hor. Waxaan helay dhowr rodol timahayguna waa cawl, laakiin aniga ayaa halkaas jooga.
On aniga ku saabsan Bogga, waxaad ka heli doontaa sawir aan kula kulmayo Seth Godin. Sawirka madaxayga ayaa igu leh suudh la mid ah suudhka aan ku sawiray sawirka Seth. Waa suudhii aan jeclaa welina waan xidhaa. Waligay ma dhicin, laakiin waxaan ogahay in calooshaydu ay ku tiirsan tahay suunka si ka badan sidii hore.
Bishii la soo dhaafay waxaa la igu dhiirrigeliyay in aan hoos u dhigo xoogaa rodol ah waxaana hoos u dhacay 10 rodol. Daacadnimo oo dhan, waxaan u istaagi karaa inaan lumiyo 100 rodol. Xaqiiqdii waan buurnaa - natiijooyinka qaab nololeed jimicsi la'aan iyo cunno aad u badan.
Sikastaba, waxaan ka naxay emailka Mike laakiin waxaan dareemay inaan ku qasbanahay inaan ka jawaabo. Ujeedada sawirkeyga ee cinwaankayga ma aha inaan helo sawirka ugu naxdinta badan ee aan heli karo oo aan ku dhajiyo halkaas si aan dadka uga fogeeyo. Waa sawir aan jeclahay. Aniga, run ahaantii, waa lagu garan karaa sawirka (maahan waqti hore) dadkuna mar walba way ii yimaadaan si ay ii ogeysiiyaan inay akhriyaan balooggeyga.
Sawirka ayaa shaqadiisa qabanaya… waxay wejigayga soo dhaweynaysaa oo tusaysaa dadka in uu jiro qof dhab ah oo ka dambeeya.
Weligaa ma aragtay Pamela Anderson iyada oo aan la qurxin? Ma jiraa qof u taga Pamela oo u sheega in ay 'been u sheegayso' dadka maxaa yeelay waxay aad ugu qurux badan tahay iyada oo la isku qurxiyo? Dabcan maya! Iyo xirfadeeda kaliya is si aad u eegto wanaag.
Shaqadaydu ma aha inaan noqdo moodel ama jilaa. Shaqadaydu waa inaan ka dhex shaqeeyo suuq -geynta suuqyada iyo teknolojiyadda oo aan macluumaadkaas la wadaago akhristayaasha bloggeyga. Haddii aad u malaynayso inaan si uun u samaynayo qof wax u dhimaya ama aan daacad ahayn anigoo naftayda iska qaata toogasho soo jiidasho leh oo fiican oo aan ku dhajiyo madaxayga… nolol hel.
Mike, waa inaad noqotaa isla ninka dib u soo celiya hamburgerkiisa maxaa yeelay uma eka sida xayeysiiska. Miyaad wali qortay Tom Cruise si aad u ogaato inay tahay inuu u ekaado sida ugu gaaban filimadiisa? Marka xigta waxaad go'aansataa inaad ila soo xiriirto foomkayga xiriirka, nin kor u qaad oo isticmaal cinwaan emayl dhab ah. Waxaan qoray cinwaanka iimaylka aad i dhaaftay wayna soo boodday.
PS: Anigu ma xidhanayo wax is-qurxin ah oo ku jira sawirka madaxa. 🙂
Oooy! Faallooyinku way soo noqdeen.
Sep 24, 2007 at 9: 23 PM
Douglas, waxaan kuugu hambalyeynayaa inaad lumisay 10 rodol! 10-ka hore waa kuwa ugu adag, laakiin sii wad 🙂
Sep 24, 2007 at 10: 13 PM
Kadib markaan aqriyay qoraalkan waxaan dareemay inaan qasbay inaan faallo ka bixiyo. Barashada xiriirka bulshada waxay i siisay aragti xiiso leh oo ku saabsan maahmaahdii hore? Aragtida waa run oo waa in la maareeyaa.? Waxaan u arkaa wax xiiso leh inta qof ee jira - sida akhristaha Mike - oo aan ka warqabin in dhacdadan ay jirto, ama haddii kale ay gebi ahaanba ku fadeexeeyeen. Waxaan u maleynayaa in doodaada aad ku taageereyso tan oo ah dhaqan la aqbali karo ay ahayd mid si wanaagsan loo farsameeyay. Xaqiiqdii way fiicantahay in lagu arko weji soo dhaweyn ah dusha sare ee bartaada oo aan dhaafsiisneyn xadka caqliga ama anshaxa si loo arko sababta aad u dooran laheyd da 'yar, soo dhaweyn? waji u fiirinaya si loo soo bandhigo dadweynaha. Pamela Anderson waxoogaa ayaa soo jiidasho leh oo maad ah. Tani waxay ahayd markii iigu horreysay ee aan waligay arko Pam iyada oo aan is qurxin? nin, waxaan dareemayaa sidaas? been laga sheegay! Waan hubaa in qofna (oo aan ahayn Mike dabcan) uu kugu qancin karo toogashadaada soo jiidashada shirkadda. Aniga mid aad ayaan ugu faraxsanahay inaad dooratay inaad soo dhigto iyo xitaa intaa ka sii badan si Mike uu go'aansaday inuu kuugu yeero, iyada oo aan la helin dad sida Mike oo kale ah, waligeen ma aanan helin farxad ka heleysa caqligaaga caqliga leh. Ka dib oo dhan, kaliya maahan suuqgeyn? Sidoo kale ku saabsan qurxinta ,? sidoo kale waxay ku saabsan tahay awoodda lagu leexinayo mindi mararka qaarkood ee diidmada qaab u leh xirfad labadaba isla markaana caqli iyo hal abuur leh oo ku filan oo dadweynaha loogu jiido dhinacaaga. Wanaagsan
Sep 24, 2007 at 11: 24 PM
Ouch Doug, wuxuu ku dhacayaa khiyaanooyinka aan xitaa dhajinta faallooyinka? Waxaan kuu rajeynayaa nasiib inaad lumiso miisaanka. Mid ka mid ah shaqaalihii aad wada shaqeeyn jirteen, Dan W., ayaa sii wadaya inuu aamusnaan hoos u dhigo rodol waxaana rajeynayaa inaad sidaas oo kale sameyn kartaan.
Sep 25, 2007 at 7: 53 AM
Waxaan kuugu hambalyaynayaa 10ka rodol, Doug, iyo nasiib wacan nidaamka jimicsiga mustaqbalka. Anigu waxaan ka mid ahay kuwa nasiibka badan, oo ku barakeysan dheef-shiid kiimikaad sarreeya, laakiin waxaan hubaa inay taasi dhaqso u dhici doonto, markii aan gaadho 30-jirkayga.
Sep 26, 2007 at 11: 08 AM
Shaqo fiican Doug inaad miisaanka iska rido Way fududahay in la xidho miisaanka oo aad u adag in laga saaro.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ka walwalsanahay inaad qof sidan oo kale ah ugu yeedho boostada dadweynaha.
Qofkani Mike wuu kula soo xiriiray, si gaar ah, inuu wax u soo qaado iyo sababtoo ah "wuu kaa argagaxay", taasi waxay ka dhigeysaa mid u qalma boosto?
Maxay yihiin e-mayllada kale ee gaarka loo leeyahay ee aad hesho oo aad isku beddelayso qoraallo? laga yaabaa inaad u baahan tahay siyaasad gaar ah oo ku saabsan boggaaga?
Mid ka mid ah faallooyinkaaga kor ku xusan ee ka yimid Patrick Farrell wuxuu leeyahay "ku dhicitaanka tuugagyada aan xitaa dhajinta faallooyinka" laakiin ma arko sida emaylka gaarka loo leeyahay loogu tixgeliyo inuu yahay gorgortan.
Sida iska cad Mike wuxuu keenay qodob sax ah adiguna waxaad kuhadashay qoraalkan dhexdiisa.
Waan ku raacsanahay inay tahay wax yar oo marin habaabin ah oo leh sawir duug ah oo ah madaxaaga. Waxaan sidoo kale ku raacsanahay sababta aad u sameysay inkastoo.
Si kastaba ha noqotee, ka waran haddii qof doonayo inuu kuu shaqaaleysiiyo hadal ama soo bandhigid waxayna u maleynayaan inay ka helayaan ninkaaga madaxaaga, markaa markaad timaaddo oo aad u muuqato mid ka duwan?
Sikastaba ha noqotee, shaqo fiican oo ku saabsan miisaanka hoos u dhaca. Sameynta socodka maalinlaha ah iyo cabitaanka biyo badan ayaa kaa caawin doona.
Sidoo kale, xakamaynta qaybta sidoo kale. Waan ogahay inay adagtahay laakiin waxaad umuuqataa qof dadaala. Waad samayn kartaa. Akhristayaashaadu kalsooni ayey kugu qabaan.
Sep 26, 2007 at 1: 13 PM
Hm. Kani waa qormadii aan isku dayey inaan faallo ka bixiyo, laakiin ma awoodin. Hadda, waan ku faraxsanahay taas maxaa yeelay waxay i siinaysaa fursad aan ku arko waxa dadka kale leeyihiin.
Uma maleynayo inaad u egtahay qof shaqsi ahaan aad uga duwan tahay sawirkaaga madaxa. Waa "madax-xannuun" dhammaantiis, mar walbana wax yar baannu ka duwan nahay marka aad isku darka xirmada oo dhan isku darto. Maxay rabaan inaad sameyso? Ma ku dhejin doontaa sawirka jirka oo buuxa madaxa? Hadda taasi waxay hubaal ku biirin laheyd aqoonta iyo waxbarashada aan ka helno bartaada, miyaanay kula ahayn? (ku qor indhaha oo duudduuban iyo "julie" sarcasm halkan) Had iyo jeer waxaan doortaa waxa baloogyada aan akhriyo iyada oo ku saleysan haddii aan heli karo sawir sax ah oo blogger ah.
Waxaan si adag u diidanahay bayaanka in sawirkaagii hore uu yahay mid marin habaabin ah, qaasatan markii la shaqaaleeyo si uu u hadlo ama u bandhigo. Xaqiiqdii waxaad u fidisaa adeegyadan ururkeyga waana inaan dhahaa qof walba had iyo jeer wuu ka baqayaa tirada badan ee ay kaa barteen. Ma jiro qof dan ka leh muuqaalkaaga jirka (illaa intaad qubeysato oo aad labbisato, waan hubaa).
Saaxiib shaqsi ahaaneed iyo jaal wadaag ganacsi waxaan leeyahay ku ilaali sawirkaaga cinwaanka sida uu yahay hana ka siin fikir kale. Waxay u taagan tahay dhoolla-caddayntaada xiisaha leh iyo naxariistaada runta ah; ereyadaada iyo qoraaladaadu waxay matalayaan sirdoonkaaga iyo xog uruurinta ballaaran iyo xirfadaha faafinta.
Grr. Mawduucani runtii wuu “kor u kacay khayaanadaydii”. Waxaan kuugu hambalyeynayaa miisaanka oo yaraaday oo sii wad, in kastoo! Waxaan rabnaa inaad sida ugu macquulsan aad u caafimaad qabtid. Ma qiyaasi karo nooca dynamo ee aad ahaan laheyd tamar badan… ..Daawo dunida ……
5, 2007 at 3: 29 PM
Wow - qof kastaa wuxuu leeyahay ra'yigiisa u gaarka ah ee ku saabsan qoraalkan waana taas faallooyinka loogu talagalay. Anigu shaqsiyan waxaan u maleynayaa inay fikrad fiican ahayd in tan la dhajiyo. Waxay ii ahayd il-furid in aan garto in ay muhiim tahay in aad iska dhigto muuqaal naftaada u eg oo fiican. Dabcan, ma dooneysid sawir kaa dhigaya mid aan la aqoonsan karin, laakiin kiiskan, ma aadan dooneyn. Waad ku mahadsantahay tilmaamida fikraddan suuq geynta ah dhamaanteen.